Seddex barnaamij oo aad ubaahantahay inaad si hufan ugu socodsiiso ganacsigaaga ganacsiga | Martech Zone
Waxaa jira tafaariiqleyaal badan oo e-commerce ah oo halkaas yaal - adiguna waxaad ka mid tahay iyaga. Waxaad ku jirtaa muddada dheer. Sidan oo kale, waxaad u baahan tahay inaad awood u yeelatid inaad la tartantid sida ugu wanaagsan boqolaalka kun ee dukaamada khadka tooska ah ee internetka ku jira maanta. Laakiin sidee taas u samaynaysaa?
Waxaad u baahan tahay inaad hubiso in websaydhkaagu yahay sida rafcaan qaadasho sida ugu macquulsan. Haddii si xun loo qaabeeyey, ma magac weyn, fartaada ayaa aad u yar (ama aad u weyn), astaantaadu waxay ku dhex jirtaa asalka dukaankaaga internetka, badhamada hagitaanku waxay ku yaalliin meel aan fiicnayn (ka fikir bar raadinta!), Ama haddii midabada aad ku dooratay boggaaga internetka ay sameeyaan inaadan si fiican ula shaqeyn dhaqanka aad wax u iibineyso, markaa waxaad u baahan doontaa inaad dib uga fikirto naqshadeyntaada. Taasi waa barta aad ka bilaabaneyso.
Haddii dukaankaaga ganacsiga uu leeyahay xirfadeed dareento, markaa waxaad u baahan tahay inaad fiiriso alaabada aad iibineyso. Iyagu ma yihiin kuwa rafcaan u leh dhagaystayaasha ugu ballaadhan, mise waxaad hiigsanaysaa koox gaar ah oo macaamiil ah? Si kastaba ha noqotee waa hagaagsan tahay, laakiin waxay saameyn ku yeelan kartaa guushaada haddii aadan u adeegin macaamiishaada. Sidoo kale, sheyadan ma yihiin kuwo tayo sare leh, mise waa kuwo wax laga soo dhoofiyo oo raqiis ah? Haddii badeecadaadu kala go'do, markaa adiguna sidaas oo kale waad dhici doontaa.
Fiiri adiga marketing. Sidee u suuqgeysaa meheraddaada? Boggee ayaad ka xayaysiinaysaa iyo sidee ayey waxtar u leeyihiin barnaamijyadaas? Ma adeegsi wanaagsan oo lacagtaada ah? Hubso inaad heleyso booggii ugu weynaa ee ku soo dhacay, dadaalkaaguna waa sida ugu macquulsan uguna macquulsan.
Haddii intaas oo dhami shaqeynayaan, markaa waxaa la joogaa xilligii la hagaajin lahaa ganacsigaaga. Haddii wax kasta oo kale ay yaalliin, waxaad bilaabi kartaa inaad fiiriso howlahaaga iyo howlahaaga shaqsiyeed si aad u horumariso adeegga macaamiisha, xawaaraha adeegga, iyo buuxinta badeecada.
Si lagaaga caawiyo dhinacyadan ganacsigaaga, waxaan ka wada hadalnay qaar ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee aad ku maamuli karto dukaankaaga ganacsiga.
The Google Analytics app wuxuu ku siin doonaa gees gees labada dhinac ee suuq-geynta ganacsigaaga iyo iibka. Abku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la socoto booqashooyinka websaydhkaaga. Waxaad arki kartaa tirada aragtiyada bog walboo uu helayo. Waxa kale oo aad arki kartaa tirada booqashooyinka ay ku helaan waqtiga, oo ay go'aamiyaan miirayaasha aad ku dejisay barnaamijka.
Abkan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad aragto halka ay aragtidu ka imanayso. Inta badan rajooyinkaaga macaamiisha ayaa laga yaabaa inay ka dukaameysanayaan goobtaada e-commerce adoo ka imanaya dibedda oo aadan ka warqabin. Markaad aragto tilmaamahan waxay kuu oggolaaneysaa inaad wax ka beddesho qaabka ganacsigaaga oo aad bakhaarkaaga internetka wax badan ka siiso macaamiisha shisheeyaha ah ee xiiseynaya iibsashada alaabtaada.
Sidoo kale, markaad aragto bogagga wax iibinaya, waxaad arki kartaa noocyada alaabada ay macaamiishaadu iibsanayaan. Tani waxay ku siin doontaa fursad aad ku nadiifiso wixii alaab ah ee aan iibinayn oo aad la imaanayso saf alaab ah oo ay macaamiishaadu doonayaan.
Isku qor Google Analytics
Kani waa barnaamij cajiib ah! Ganacsiyada lebenka iyo madaafiicda waa inay ku tiirsanaadaan nooca dhaqameed ee alaabooyinkooda u keenaya alaabada: waa inay helaan jumlaaleyaal qaada alaabada ay rabaan inay ku qaadaan bakhaarradooda, ka dibna ku iibsadaan tiro badan si ay u helaan heshiisyada qiimaha ugu fiican (ama sababta oo ah Jumladleydu waxay u baahan tahay cabbirka ugu yar ee la dalban karo).
Kadibna waa inay sugaan inta badeecadu imaanayso toddobaadyo kadib. Xaaladda tafaariiqleyda silsiladaha ah sida Wal-Mart iyo Target, waxyaabaha jumlada ah waa in marka hore la geeyo xarunta wax qeybinta ka hor inta aan la abaabulin, oo lagu rakibayo bakhaar kasta, ka dibna loo raro dukaamada kala duwan.
Tafaariiqleyda 'Ecommerce' waxay ku tiirsanaan doonaan jumladleyda soo jireenka ah inta badan badeecadooda. Laakiin waqtiyadu way isbadalayaan, Oberlo waxay siineysaa wax yar, dukaamada internetka hab wanaagsan oo lagu iibiyo alaabtooda.
Halkii aad wax uga iibsan lahayd alaab-qeybiyaha, uma baahnid inaad wax dalbato - ugu yaraan maahan illaa macaamilku amar bixiyo. Oberlo waxay kuu ogolaaneysaa inaad alaab ka keento kumanaan alaab-qeybiyeyaal ah si toos ah dukaankaaga internetka. Kadib waxaad amarka macaamiisha la dhigeysaa alaab-qeybiyaha. Alaab-qeybiyaha ayaa markaa u ridi doona amarka albaabka hore ee macaamiisha.
Tani waa isbeddel weyn oo ku yimid xiriirka tafaariiqle / ganacsade jumladle maxaa yeelay tafaariiqleydu maahan inay lacag badan oo alaab ah bixiso. Shayga ayaa si toos ah uga socda jumlada iibiyaha.
Si bilaash ah iskaga diiwaan geli Oberlo
SalesforceIQ waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee loogu talagalay adiga Maamulka Xiriirka Macaamiisha. Barnaamijkani wuxuu ku siinayaa awood aad kaga falceliso arrimaha macaamiisha; haddii dhibaato ka jirto hababka, macaamiishaadu hubaal way kula soo socodsiin doonaan. Barnaamijkan CRM wuxuu kuu oggolaan doonaa inaad ka jawaabto dhibaatooyinkaas, labadaba xagga aragtida macaamilka iyo aragtidaada gudaha ah. Waxaad ku bilaabi kartaa hagaajinta dhibaatada isla markiiba.
'SalesforceIQ' sidoo kale wuxuu isku darayaa dhamaan kanaalladaada warbaahinta bulshada hal barxad dhexe. Waad la xiriiri kartaa martidaada farxadda leh oo aad la macaamili kartaa, adigoo uga mahadcelinaya qaab ay dhammaan wax u arki karaan. Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa asxaabta iyo asxaabta asxaabta macaamiishaada iyadoo ujeedadu tahay inaad u beddesho macaamiil cusub. Barnaamijkan CRM, waxaad ku abuuri kartaa ganacsi soo noqnoqda iyo sidoo kale inaad bilowdo durdurro cusub oo dakhli ah oo loogu talagalay bakhaarkaaga ganacsiga.
Barnaamijyadan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku maareyso ganacsigaaga si wax ku ool ah oo hufan. Waxaad awoodi doontaa inaad ilaaliso xulashada alaabtaada iyo keydkaaga adoo ka faa'iideysanaya isku xirnaanshaha iibiyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha si dhakhso ah loogu buuxiyo.
Waxaad sidoo kale awood u yeelan doontaa inaad maamusho xiriirka macmiilkaaga iyo isdhexgalkaaga, iyo suuq u gaynta kuwa kale ee suurtogalka ah. Dib u eegista iibka barnaamijyadan ayaa sidoo kale ku siin doonta awood aad ugu falceliso isbeddellada ganacsiga waqtiga dhabta ah, iyagoo ku siinaya fursad aad ku kordhiso iibinta isla maalintaas.
Barnaamijyadan adoo adeegsanaya, waxaad ganacsigaaga ka dhigi doontaa mid hufan oo tartan leh.
Saxeex u noqo Tijaabinta Iforti ee Bilaashka ah 'IQ'
Tags: ecommerceiibinta daruuriga ah